လုပ်သမျှတွေ အကုန်ထုတ်ပြောပြပြီး ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးပြ မှ တော်လှန်နေတယ်ထင်ရင် ငါ့လည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ပါတော့ ဆိုတဲ့ ရဲရင့်အောင် – Shwe Likes
လုပ်သမျှတွေ အကုန်ထုတ်ပြောပြပြီး ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးပြ မှ တော်လှန်နေတယ်ထင်ရင် ငါ့လည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ပါတော့ ဆိုတဲ့ ရဲရင့်အောင်
G Shwe | June 26, 2021 | Celebrity | No Comments
တနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ အမှန်တရား ဘက်က ရပ်တည်သူများ ထဲတွင် အဆိုတော် ရဲရင့်အောင် လည်း အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လက်ရှိဖြစ်ေ ပါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ လည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ေ ဖာ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တေ လာမှာတော့ အခြေအေ နအရပ်ရပ်ကြောင့် ဘေးက င်းရာသို့ တိမ်းရှောင်နေ ရတာကြောင့် သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေ မှုတွေကို အပြည့်အစုံ မဝေမျှနို င်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြော င်းအရ င်းတွေကို မသိဘဲ တစ်ချို့တွေ က ရဲရင့်အောင် အား ဝေဖန်ပြောဆိုေ နကြတာေ တွ ရှိပါတယ်။
မနေ့ညက သူ့ရဲ့ Facebook Story မှာ တော်လှ န်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလှုပ် ရှားမှုမှမေ တွ့လို့ အပြစ်တင် ဝေဖန်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ ချက်ကျလက်ချ ပြန်ရှင်းြ ပ လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့ ရတယ်ဆိုတာ အကုန်ထုတ်ေြ ပာပြီး ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးပြမှ၊ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတာေ တွကို Facebook မှာ post တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှ န်တယ်လို့ သတ်မှတ်နေတယ်ဆိုရင် သူ့ကိုလည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ကြဖို့ စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသား ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူလုပ်သမျှ အရာတွေဟာ ဘယ်သူမှသဘောကျ ကျေနပ်ဖို့ မ ဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ် လုပ်နေတာဖြစ်ကြော င်းကိုလည်း အခုလို ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ခဲ့ရတယ် အခုဘာေ တွလုပ်နေတယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေနေရတ ယ်ဆိုတာတွေကို အကုန်ထုတ်ေြ ပာပြပြီး ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးပြမှ ၊ နေ့စဉ်ဖြစ်သမျှ သတင်းတွေကို အများနဲ့တန်းတူ နားစွင့်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲ ၊ သူများလာေြ ပာပြမှ သိရတဲ့ အခြေ အနေမျိုးထဲ နေ့တိုင်း Facebook မှာpost တွေ တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန်ေ နတယ်လို့ သတ်မှတ်တယ် ဆိုရင်တော့ ငါ့လည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက် ပါတော့ကွာ ဆုံးရှုံးစရာလည်း ကုန်သွားပါပြီ။ ငါဘာတွေလု ပ်နေလဲဆိုတာ ငါပဲသိတယ်။
February (၁) ရက်နေ့မနက် (၆) နာရီကစပြီး ငါလုပ်သမျှအရာတွေက မင်းတို့သဘော ကျဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ငါပါ အားတဲ့အချိန် စိတ်ထွက်ေ ပါက်အနေနဲ့ သုံးတဲ့ Instagram ပို့စ်တွေအောက်မှာ အာလာချောင်တာတွေ ရပ်ပါတော့ ငါတို့လုပ်စရာရှိတာတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်နေလို့ မရဘူးလား? ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေး ကာလမှာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ တစ်ချို့အရာတွေကို လူမသိအောင် လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အပြစ်ပြောမနေကြဘဲ ကိုယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ နေရာကနေသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ ပြောကြားရင်း ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
တႏိုင္ငံလံုးက ျပည္သူေတြ နဲ႕ အတူ အမွန္တရား ဘက္က ရပ္တည္သူမ်ား ထဲတြင္ အဆိုေတာ္ ရဲရင့္ေအာင္ လည္း အပါအဝင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေ ပၚေနတဲ့ လူထုလႈပ္ ရွားမႈေတြမွာ လည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေန႕စဥ္ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေ ဖာ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေ လာမွာေတာ့ အေျခအေ နအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဘးက င္းရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ေန ရတာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕လႈပ္ရွားေန မႈေတြကို အျပည့္အစုံ မေဝမွ်နို င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေၾကာ င္းအရ င္းေတြကို မသိဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ က ရဲရင့္ေအာင္ အား ေဝဖန္ေျပာဆိုေ နၾကတာေ တြ ရွိပါတယ္။ မေန႕ညက သူ႕ရဲ႕ Facebook Story မွာ ေတာ္လွ န္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘာလႈပ္ ရွားမႈမွမေ တြ႕လို႔ အျပစ္တင္ ေဝဖန္ေနတဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕ ခ်က္က်လက္ခ် ျပန္ရွင္းျ ပ လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူကေတာ့ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုေနခဲ့ ရတယ္ဆိုတာ အကုန္ထုတ္ေျ ပာၿပီး ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးျပမွ၊ ေန႕စဥ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေ တြကို Facebook မွာ post တင္ေပးနိုင္မွ ေတာ္လွ န္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ေနတယ္ဆိုရင္ သူ႕ကိုလည္း boycott စာရင္းထဲသာ ထည့္လိုက္ၾကဖို႔ စိတ္မေကာင္းစြာ ေရးသား ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူလုပ္သမွ် အရာေတြဟာ ဘယ္သူမွသေဘာက် ေက်နပ္ဖို႔ မ ဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕ ကိုယ္ လုပ္ေနတာျဖစ္ေၾကာ င္းကိုလည္း အခုလို ေရးသားေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
” ဘာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ ဘယ္လိုေတြ လုပ္ခဲ့ရတယ္ အခုဘာေ တြလုပ္ေနတယ္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုေနေနရတ ယ္ဆိုတာေတြကို အကုန္ထုတ္ေျ ပာျပၿပီး ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးျပမွ ၊ ေန႕စဥ္ျဖစ္သမွ် သတင္းေတြကို အမ်ားနဲ႕တန္းတူ နားစြင့္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးထဲ ၊ သူမ်ားလာေျ ပာျပမွ သိရတဲ့ အေျခ အေနမ်ိဳးထဲ ေန႕တိုင္း Facebook မွာpost ေတြ တင္ေပးနိုင္မွ ေတာ္လွန္ေ နတယ္လို႔ သတ္မွတ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ငါ့လည္း boycott စာရင္းထဲသာ ထည့္လိုက္ ပါေတာ့ကြာ ဆုံးရႈံးစရာလည္း ကုန္သြားပါၿပီ။ ငါဘာေတြလု ပ္ေနလဲဆိုတာ ငါပဲသိတယ္။ February (၁) ရက္ေန႕မနက္ (၆) နာရီကစၿပီး ငါလုပ္သမွ်အရာေတြက မင္းတို႔သေဘာ က်ဖိဳ႕အတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ငါ့ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕ငါပါ အားတဲ့အခ်ိန္ စိတ္ထြက္ေ ပါက္အေနနဲ႕ သုံးတဲ့ Instagram ပို႔စ္ေတြေအာက္မွာ အာလာေခ်ာင္တာေတြ ရပ္ပါေတာ့ ငါတို႔လုပ္စရာရွိတာေတြကို တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန သိုသိုသိပ္သိပ္လုပ္ေနလို႔ မရဘူးလား? ” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ကာလမွာ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကို လူမသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို အျပစ္ေျပာမေနၾကဘဲ ကိုယ္ပါဝင္နိုင္တဲ့ ေနရာကေနသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားရင္း ဒီသတင္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္။
ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရဲထိုက် ရဲ့ စိုးရိပ်စရာ သတင်းလေးတစ်ခု
ချစ်ဇနီးလေးချောလေးရဲ့(၃၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဗောဓိပင်နှင့် ခရေပင်(၁၁၀) အား စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ နေထူးနိုင်
ဝေါမြို့နယ်ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိသားစု(၁၂၀)စာ အတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း